Ikhaya elihle, eliphefumlelweyo elingaselunxwemeni elipholileyo, eliqaqambileyo nelinomoya. Ifakwe kwidolophu yeeholide engaselunxwemeni eBusselton, apho unokonwabela iziko lelali elipholileyo, indawo esembindini yepaki kunye nothotho lweevenkile, zenza le ndawo ibe sisiseko esihle sokuhlola uMzantsi Ntshona.
Inamagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela elinye, eli khaya langoku lilungele usapho oluncinci. Ukuqhayisa ngothotho lweendawo zokuphumla, ngaphakathi nangaphandle, ukusuka kwindawo yokuhlala epholileyo esembindini enekhitshi evulekileyo yesicwangciso, ukuchitheka kwindawo enkulu ye-alfresco, ukuya kwindawo eyahlukileyo yokonwabisa yangaphakathi enekona yabantwana abazinikeleyo. Ngenye indlela, phumla kwi-hammock yangaphandle, ngelixa ugoba ngeglasi yewayini kunye nencwadi elungileyo.
Nceda uqaphele, eli khaya likwindawo yokuhlala ezolileyo, ingxolo kufuneka igcinwe incinci. Nceda ube nembeko kubamelwane bakho abasebenzayo.
Le ndlu ibekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo, ingxolo kufuneka igcinwe incinci. Nceda ube nembeko kubamelwane bakho abasebenzayo.
I-Busselton yidolophu esecaleni lolwandle eneeholide ezinabantu abaninzi abathatha isigqibo sokuhlala ngokusisigxina emva kokuchitha iholide apha. Ineziko lelali elipholileyo elinendawo esembindini yepaki kunye nazo zonke iivenkile oza kuzifuna ngeholide eyonwabisayo.
Ukuba kukho umba ongxamisekileyo iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zifowunele iofisi ukuze zikhuphe unxibelelwano olungxamisekileyo kumatshini wokuphendula